ड्रम ताओ : जापानी ड्रम आर्टले विश्व जगत चुम्दा | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > ART > ड्रम ताओ : जापानी ड्रम आर्टले विश्व जगत चुम्दा
जापान संस्कृतिले भरिएको देश हो। यहाँ यस्ता धेरै चलन र कलाहरु छन् जुन हजुरले जापान घुम्न आउनु भएको बेला घुम्ने पर्ने हुदछ। हजुरलाई पक्कै पनि काबुकी नाच, माइकोको कला हेर्नु भनेर थुप्रैले रिकमेण्ड गर्नु भएको होला। कतिले यहाँ हुने कन्सर्ट, आईडल ग्रुप, कज प्ले र रेस्टुराण्ट जानु भन्नु भएको होला। के हजुरले जापानी ड्रम पर्फमिंग आर्ट सम्बन्धि सुन्नु भएको छ।
सुरुमा त हजुरहरुलाई ड्रम आर्ट हेर्न के रमाइलो होला र भन्ने लागेको होला। हुन पनि मलाई नि तेस्तै लागेको थियो। एक त चर्को आवाज त्यो माथि न त सुमधुर संगीत ड्रम पर्फमेन्स हेर्न धेरैको रुचि हुदैन। तर म आज हजुरहरुलाई मैले जापानमा अनुभब गरेको सबै भन्दा रमाइलो पर्फमेन्सको ’boutमा भन्ने छु। यो एउटा ड्रम पर्फमेन्स हो। यो पर्फमेन्स आर्टिस्टको ग्रुपको नाम ड्रम ताओ हो।
को हुन् त ड्रम ताओ ?
यो ताओ ग्रुप जापानको आईचि प्रान्तमा १९९३मा बनेको हो। यसको मुख्य उद्देस्य जापानको कला र संस्कृतिलाई उजागर गर्नु हो। यो ग्रुप जापानी स्टाईलको ड्रम (ताईको)बजाउन पोख्त छन्। तर ताओ ग्रुपले आफ़ो ड्रम पर्फमेन्समा मार्सल आर्ट, नाच, नया लाईटिङ्ग टेक्निक, कन्टेम्पोररी म्युजिक, र अन्य बाजा जस्तो कोतो, शाखाकुहाची, शामिसेन पनि थपेका हुन्छन। यी ग्रुपको मूल पर्फमेन्स जापानी शैलीमा हुने भएता पनि यिनीहरु कोरियन, माओरि र इन्डोनेसियाका नाचबाट पनि प्रभावित भएका छन्।
यो ग्रुपले आफ्नो बर्षौको कडा परिश्रम र मिहेनतले आफ्नो पर्फमेन्सलाई जापानमा मात्र नभएर विदेशमा पनि ठूलो सफलता पाएका छन्। २००४मा ड्रम ताओ विश्वकै ठूलो आर्ट फेस्टिभल- एडिन्बर्ग फेस्टिभलमा भाग लिएको थियो। उनिहरुले त्यहाँ २५ दिन लगातार पर्फमेन्स गरे र हरेक दिन उनीहरुको शो सोल्ड आऊट भएको थियो। पछि उनीहरु २०१०को भ्यानकुभर ओलम्पिकमा पर्फम गरे। त्यस लगायत उनीहरुले ४४ ठाउमा पर्फम गरे। उनीहरुको टोटलमा ५० वटा शो थियो। यो सबै शो सोल्ड आउट भएको थियो। ताओ ग्रुपले अहिले सम्म २६ देश को ५०० सहरमा आफ्नो शो गरेको छ। उनीहरको शो ८० लाख दर्शकले हेरेका छन्। उनीहरुको अफिसियल वेबसाईटमा थप जानकारी लिनुहोस्।
मानगेक्यो : उनीहरुको उत्कृष्ट पर्फमेन्स
A post shared by 万華響-MANGEKYO- (@mangekyo_official) on Nov 20, 2018 at 4:29am PST
मानगेक्यो, ताओ ग्रुपको सबै भन्दा इनोभेटिब र क्रिएटिभ शो हो। यो शो २०१७मा पहिलो चोटी भएको हो। यो शो यति रुचाईएको कि त्यसपछि यो हरेक बर्ष हुने गरेको छ। यो शो हरेक वर्षा झन् सुन्दर हुदै गएको छ। मानगेक्यो आफ्नो पर्फमेन्समा नौलो स्वाद र प्रस्तुति दिने गर्दछन। यो शोमा एक्रोबेटिक, मार्सल आर्ट, म्युजिक र अन्य एथ्निक बाजाको पर्फर्मेन्स हुने गर्दछ। यो शो जापानी भाषा नबुझ्नेहरुले पनि रमाइलो संग हेर्न सक्नु हुनेछ।
मानगेक्योको २०१९को शोको प्रतिक्षामा सबै छन्. उनीहरुको २०१९को शो टिम ल्याब संगको कोल्याबोरेसनमा हुदैछ। टिम ल्याब जापानमा डिजिटल आर्टको लागि निकै पपुलर छ। त्यसैगरी उनीहरुको कस्ट्युम निकै पपुलर डिजाईनर कोशिनो जुनको र स्टेज डिजाईन रुमी माचुईले गर्दै छन्।
ताओ पर्फमरको कडा मिहेनत
A post shared by 万華響-MANGEKYO- (@mangekyo_official) on Jun 20, 2018 at 9:39pm PDT
ताओ पर्फमरले बजाउने ड्रम अनेक साईजको हुने गर्दछ। कुनै कुनै ड्रम निकै ठुलो हुने हुनाले उचाल्न निकै बलको प्रयोग गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी उनीहरुको पर्फमेन्स विभिन्न मुभमेन्ट, फ़्लेक्सिबलिटि, र फेसियल एक्सप्रेसन देखाउनु पर्ने भएकोले धेरै नै ईनर्जेटिक काम हुने गर्दछ। पर्फमरहरुलाई आफ्नो प्रस्तुति पछि पसिनाले पुरै भिजेका हुन्छन।
ताओ ग्रुपको यस्तो पर्फमेन्सको लागि मेम्बर्हरुले निकै मेहेनत गर्नु पर्दछ। उनीहरुलाई एथ्लिट भनिन्छ। हुन पनि उनीहरुको ट्रेनिङ्ग कुनै एथ्लिट भन्दा कम हुदैन। उनीहरुको दैनिकी अभ्यास बिहान ५ बजे सुरु भएर १० बजे सम्म चल्दछ। मेंबरहरु २० घण्टा सम्म दौडिने गर्दछन। त्यसैगरि उनीहरु फिजिकल थेरापी, मार्सल आर्ट्स, ड्रम प्राक्टिस र कर्ड प्राक्टिस गर्दछन।
A performance of DRUM TAO in “The Late Show with Stephen Colbert”
पहिलो १० वर्षको समयमा ४०० ट्रेनीले काम छोडेका थिए। यसले गर्दा ड्रम ताओका बोसले ट्रेनिङ्ग तालिकामा केहि परिवर्तन लिएर आएका छन्। यस्तो परिवर्तनले ट्रेनीहरु धेरै स्टेबल हुदै गएका छन्। त्यसैगरी कामगर्ने ट्यालेन्टहरु पनि बढ्दै गएका छन्। अहिले ताओ जापानमा छाएको छ। यो उनीहरुको ७ वर्ष लामो परिश्रमले गर्दा सम्भब भएको हो। अहिले आएर उनीहरुको कडा परिश्रमले उनीहरुलाई विस्वा सामु चिनाएको छ।
टिकेट बुक गर्ने तरिका
मानगेक्यो शो बर्षेनी कन्टेम्पोररी अल्टर्नेटिभ थिएटरमा हुने गर्दछ। यो थिएटर टोक्योको युराकुचोमा छ। उनीहरुको शोको जानकारी नया तालिका, बाकी रहेका सिट र टिकेट मानगेक्योको अफिसियल वेबसाइटमा हेर्न मिल्दछ। जापान बाहिर रहनु भएकाले यो शोको टिकेट क्लूक र जपनिक्यान बाट बुक गर्न सक्नु हुनेछ। यी वेबसाईट ईङ्ग्लिशमा रहेकाले जापानी नआउनेहरुको लागि पनि कुनै समस्या हुने छैन।
Yurakucho Alternative theatre
by CaoAnh(Japan Info)
यहि जुन महिनामा टोक्योको ओदाईबामा २२औ जापान मिडिया आर्ट्स फेस्टिभल थुप्रै भेन्युहरुमाभएको थियो। शो ओदाईबाको मिराईकानमा भएको थियो। मिराईकान एउटा म्युजियम हो जसले विभिन्न शिर्षकमा एक्जिबिसनहरु प्रदर्शन गर्दछ। जुन १ देखि १६ सम्म भएको एक्जिबिसनमा बर्ष भरिका अवार्ड जितेका आर्ट र ईन्टरटेनमेन्टहरु राखिएको थियो। यो व्क्जिबिसन टोक्योमा भएता पनि , १०० भन्दा बढी देशका मानिसहरुले…
यहाँहरु सबैलाई जापानले लागु गरेको नया ईमिग्रेसन कन्ट्रोल ल को विषयमा पक्कै पनि जानकारी होला। स्पेसल स्किल भिजा यानिकि तोकुतेइ गिनोउ भिजाको लागि परिक्षा पनि सुरु भै सकेको छ। भविस्यमा पनि यसको परिक्षा हुने जानकारी ईमिग्रेसन डिपार्टमेन्टले जनाएको छ। (थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला।) खुसिको खबर चाहि यो स्किल भिजा दुईजना बिदेशीहरुले पाई…